Archives des Toe-karena - Politika
Tsy azo ihodivirana ny fampiasana solika. Singa iray manan-danja tokoa ho an’ny toe-karena izy io. Misy fifanandrinana manodidina ny resaka solika amin’izao fotoana izao. Mihenjan-droa ny tady. Noraisin’ny filohan’ny repoblika…
Anisan’ny fampanantenana nataon’ny filohan’ny repoblika nandritra ny fampielezan-kevitra ny fisondrotan-karama. Nasondrotra ny karama farany ambany isam-bolana andraisana mpiasa eto Madagasikara. Maro ny vokatra naterak’izany. Zomà 31 mey 2019. Manoloana ny…